Iindaba - Uthini umahluko phakathi kwee-oyile zohlobo lwe-oyile kunye neziguquli zodidi olomileyo?
1. Indalo eyahlukileyo
1. I-oyile-uhlobo lwe-transformer: uhlobo olutsha lwe-transformer ephezulu yokusebenza enesakhiwo esinengqiqo ngakumbi kunye nokusebenza okungcono.
2. Iziguquli zodidi olomileyo: ii-transformers ezine-iron cores kunye ne-windings azifakwanga kwioli ye-insulating.
Okwesibini, iimpawu ziyahluka
1. Iimpawu ze-oyile-type transformer:
(1) Iziguquli zohlobo lwe-oyile zihlala zisebenzisa iindlela ezintathu zokupholisa: ukuzipholisa ngeoyile, ukupholisa umoya okuntywiliselwe ngeoyile kunye nokujikeleza kweoli ngenkani.
(2) Iziguquli zodidi lwe-oyile zithatha ubushushu ngokuhambisa ioyile yendalo.Inkqubo yokupholisa i-oyile ye-oyile isekelwe kwi-oil-immersed self-cooling system, yongeza i-fan yokuvuthela umoya kwi-tank ye-fuel kunye nombhobho we-oyile ukunyusa umphumo wokutshatyalaliswa kobushushu.Ukujikeleza kweoli okunyanzeliswayo kukupompa ioli eshushu kwi-transformer ukuya ngaphandle kwe-transformer yokupholisa, kwaye emva koko uyithumele kwi-transformer.
2. Iimpawu zesiguquli sohlobo olomileyo:
(1) Ikhuselekile, ayinamlilo kwaye ayingcolisi, kwaye inokusebenza ngokuthe ngqo kwiziko lomthwalo;
(2) Yamkela itekhnoloji ephucukileyo yasekhaya, amandla amakhulu oomatshini, ukuxhathisa okunamandla kwisekethe emfutshane, ukukhutshwa okuncinci, ukuzinza okuhle kwe-thermal, ukuthembeka okuphezulu kunye nobomi benkonzo ende.
(3) Ilahleko ephantsi, ingxolo ephantsi, umphumo ocacileyo wokonga umbane kunye nokugcinwa kokungabikho;
(4) Ukusebenza kakuhle kokutshatyalaliswa kobushushu, umthamo oqinileyo womthwalo, kunye nokwandisa ukusebenza kwamandla ngexesha lokupholisa umoya ngenkani;
(5) Ukuxhathisa okulungileyo kokufuma, okufanelekileyo kwiindawo ezinzima ezifana nokufuma okuphezulu.
Isixhobo sokukhusela i-microcomputer ye-transformer eyomileyo yamazwe ngamazwe ithatha i-DSP ephakamileyo yamazwe ngamazwe kunye ne-teknoloji ye-surface Mount kunye ne-flexible field bus (CAN) iteknoloji, ehlangabezana neemfuno zamanqanaba ombane ohlukeneyo wesikhululo esingaphantsi kunye nokuqonda ukulungelelaniswa, ukufakwa kwidijithali kunye nobukrelekrele besikhululo.
I-Dry-type transformers ingakwazi ukugqiba imisebenzi yokukhusela i-substation, ukulinganisa, ukulawula, ukulawulwa, umqondiso, ukurekhodwa kwempazamo, ukufumana amandla, ukukhethwa komgca wokumisa okuphantsi, ukuchithwa komthwalo ophantsi, njl., ukwenzela ukuba iimfuno zobugcisa, imisebenzi kunye i-wiring yangaphakathi yemveliso isemgangathweni ngakumbi.I-transformer eyomileyo ithatha umlinganiselo wokukhusela osasaziweyo kunye nesixhobo sokulawula, esinokufakelwa phakathi okanye sibekwe phantsi, kwaye ulungelelwaniso lunokutshintshwa ngokungqongqo ngokweemfuno zomsebenzisi ukuhlangabezana neemfuno zezicwangciso ezahlukeneyo.
Ngolwazi oluthe kratya malunga ne-transformer, unokujonga eli nqaku:Umgaqo weTransformer